के काँचो आहारले खानेकुरा राम्ररी पचाउन सहयोग गर्दछ ? काँचो फलफूल तथा तरकारी खादाको फाइदा कति ? - Aajako Nepali Khabar
के काँचो आहारले खानेकुरा राम्ररी पचाउन सहयोग गर्दछ ? काँचो फलफूल तथा तरकारी खादाको फाइदा कति ?
admin - March 9, 2021 March 9, 2021
हाम्रो खानपानमा कतिपय फल तथा तरकारी काँचो समावेश हुने गर्दछ । धेरैलाई काँचो फल वा तरकारी मन नपर्न सक्छ । स्वस्थ्य शरीरलाई खानामा काँचो आहार राम्रो मानिन्छ । काँचो आहारले खानेकुरा राम्ररी पचाउन सहयोग गर्दछ । साथै यसको पोषक तत्व पुर्ण रुपमा शरीरले पाउँछ ।
३, पोषक तत्व
४, स्वस्थ्य पाचन यन्त्र
६, मोटोपन घटाउँछ
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए